phyo@admin – phyodaybyday
Home / Author Archives: phyo@admin
Like	10,678 Comments Uncategorized
ဒီနတေ့ော့ ဖွိုးမိတျကပျပွငျတဲ့ဖကျကိုသှားပါမယျ ။ ပှဲလမျးမြားတဲ့ရာသီမို့ မိတျကပျတဈခါမဟုတျတဈခါပွငျရမယျ့အခြိနျမြိူးမှာ အသားပတျနရေငျ မိတျကပျတှခွေောကျသှနေ့ရေငျ လိမျးရတာအဆငျမပွေ ပုံထှကျလညျးမလှတတျပါဘူး ။ အဲ့တော့ဖွိုးဒီနမှေ့ာ ဆောငျးတှငျးအေးတဲ့အခြိနျ မိတျကပျကို သဘာဝကကြ ကွညျကွညျလေးဖွဈနအေောငျ ဘယျအခကျြတှသေတိထားဖို့လို့လညျး ပွောပွပေးသှားပါမယျ ။ ၁. အရေးကွီးဆုံးက ဒီရာသီမှာ မိတျကပျမလိမျးခငျ Skincare သခြောပေါကျလုပျပေး Mousturizer…
Like	8,291 Comments Uncategorized
အားလုံးပဲမင်ျဂလာပါနျော မနကေ့ဖွိုး ဆောငျးရာသီအတှကျ skincare post လေးတငျပေးတော့ အတျောမြားမြား ဆောငျတှငျးမှာသုံးဖို့ moisturizer မေးကွတာတှပေ့ါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ အသားလညျးခွောကျတယျ အဆီလညျးပွနျတယျဆိုတဲ့ skin ပိုငျရှငျတှပေါ ။ ဒီကာလမှာ ဒီပွသနာတျောတျောဖွဈကွတာ နှဈတိုငျးတှပေ့ါတယျ ။ ဖွိုးကိုယျတိုငျလညျး ဖွဈနကေပြွသနာပါ ။ အဆီပွနျရဲ့သားနဲ့အသားဘာလို့ခွောကျတာလညျး…
Like	15,536 Comments all, Lifestyle, MenCare, WomenCare
Like	15,313 Comments all, beauty, Lifestyle, WomenCare
Like	12,806 Comments all, beauty, Lifestyle, Review, WomenCare
December လတစ်ရက်နေ့တောင်ရောက်ပြီဆိုတော့ ဖြိုးတို့မကြာခင် 2018 ကိုနှုတ်ဆက်ရတော့မှာပါ ။ ဒီတော့ဖြိုးတို့ ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာသုံးခဲ့ စမ်းခဲ့တဲ့ product တွေထဲက အကြိုက်ဆုံးလေးတွေကို ပြန်ထုတ်နှုတ်လိုက်ရအောင်ပါ ။ ဖြိုးဒီနေ့တော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လက်ကမချနိုင်အောင်ဆိုးဖြစ်နေတဲ့ lipstick တွေအကြောင်း အရင်စပြောချင်ပါတယ် ။ Beauty Mogul တွေ Beauty…
Like	9,226 Comments all, beauty, Lifestyle, MenCare, WomenCare
Like	14,262 Comments all, Lifestyle, Style
Like	10,141 Comments all, beauty
Hello !!! အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ။ နွေရာသီမှာအမေးများဆုံး မေးခွန်းလေးအတွက် အဖြေလေးတွေလာပါပြီရှင် ။ ဒီပို့စ်ကတော့ မမတွေတင်မကပဲ ကိုကိုတွေလည်းပါပါတယ် ။ လူနေမှုပြောင်းလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ first impression ကသိပ်ကိုအရေးကြီးလို့ မိန်းကလေးတွေတင်မကပဲ ယောက်ျားလေးတွေကပါ အသားအရည်ကိုအထူးဂရုစိုက်တာ တွေ့လာရပါတယ် ။ ကျွန်မ follower…
Like	15,823 Comments all, beauty
Hello !!! အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ။ မင်္ဂလာပါချစ်တို့ရေ ။ ကျွန်မအခုနောက်ပိုင်းသတိထားမိတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ အမျိုးသမီးကြီ ကြီးငယ်ငယ်မရွေး Skincare ပေါ်မှာအာရုံစိုက် စိတ်ဝင်စားလာကြတာကိုပါ ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း skin ကို အလွန်ဂရုစိုက်ဖြစ်သူ Skin ကောင်းလာတာတွေလည်း မျက်မြင်ထင်ရှားတွေ့နေရတာလေးတွေရှိလို့ အမျိုးသမီးတော်တော်များများက အားကိုးပြီးလာတိုင်ပင်ကြပါတယ်…
Like	10,866 Comments all, Style
မင်္ဂလာမန္တလေးထဲမှာ Spaghetti strap top ???leather blend pants ? and Suede ankle Boots ??? !!! Hello !!! အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ !!! ကျွန်မမန္တလေးကိုသွားခဲ့တုန်းက မင်္ဂလာမန္တလေးမှာဝတ်တဲ့ outfit လေးကို သဘောကျကြတယ်ဆိုလို့ ကျွန်မရဲ့ outfit…